AppleCare + vidin'ny Watch | Avy amin'ny mac aho
Jordi Gimenez | | Apple Watch, iPhone, Apple products
Nandehandeha namaky ny magazay an-tserasera Apple aho ary nanara-maso ny varotra sy ny hafa ao amin'ny Apple Watch ary ny MacBook Retina 12-inch vaovao, dia nahatsikaritra antsipirihany iray ho an'ireo mpampiasa nahavita nividy iray amin'ireo famantaranam-bolan'ny orinasa sy izay te hiaro azy amin'ny AppleCare +.
Ity serivisy fiantohana fanampiny ity sy ny fandrakofana izay natolotry ny orinasa nandritra ny fotoana ela dia fantatry ny mpampiasa Apple rehetra, saingy tamin'ny fanombohan'ny smartwatch vaovao, ireo avy ao amin'ny Cupertino dia nanao fanovana lehibe teo amin'ny serivisy. Ny lohahevitry ny fandrakofana sy ny hafa dia mijanona ho toy ny teo aloha ihany, tsy miova izany, fa ankehitriny Ireo mpampiasa mijery dia afaka mividy AppleCare + ho an'ny iPhone sy Watch miaraka amin'izay.
Amin'izao fotoana izao dia tsy misy io safidy AppleCare + io any amin'ireo firenena nanombohana ny smartwatch, saingy mieritreritra izahay fa vantany vao amidy any amin'ny firenen-kafa ho hita ihany koa. Ireo mpampiasa Apple dia afaka manao fifanarahana amin'ny AppleCare any Espana alohan'ny roa taona voalohany aorian'ny fividianana azy: «ny drafitra fiarovana AppleCare hanitarana ny fandrakofana ara-teknika sy ny fanamboarana fitaovana ho roa taona manomboka amin'ny andro nividiananao ny iPhone» ka raha manana iPhone 6 izahay ary mividiana Apple Watch, ity serivisy ity dia azo ifanarahana amin'ny fitaovana roa miaraka.
Ny tena izy dia tranga vaovao ity izay miharihary fa tsy nisy tamin'ny idealy Apple hatramin'ny nanombohan'ny Apple Watch ary ankehitriny dia afaka mankafy ireo mpampiasa izay maniry handray izany serivisy izany izahay. Amin'izao fotoana izao dia tsy hita any Espana izy io, fa any amin'ireo firenena nanombohana ny Watch sy izao dia mandeha amin'ny vidiny izahay.
AppleCare + vidiny
Raha ny fividianana Apple Watch Sport dia samy maodely 38 mm sy 42 mm, ny vidiny any Etazonia dia 49 dolara ary raha ny tadiavintsika dia ny hahazoana antoka koa ny iPhone, ny combo dia hampiakatra antsika hatramin'ny $ 149. Miitatra hatrany hatrany ny fandrakofana 2 taona.
Ho an'ireo mpampiasa izay hividy na mieritreritra ny hihazona ilay maodely vy, ny Watch dia miova kely ny raharaha. mbola 2 taona ny fandrakofana ary somary avo kokoa ny vidiny. 69 dolara no resahina ho an'ny famantaranandro irery ary avy amin'ny 169 dolara ho an'ny set ny iPhone plus Watch.
Raha nividy na nikasa ny hividy Watch Edition izahay dia hiova tanteraka ny raharaha. Ny voalohany ny fotoana fandrakofana ny famantaranandro, izay mahatratra 3 taona ary avy eo mazava ho azy ny vidiny. Ho an'ny famantaranandro $ 10.000 na mihoatra, Apple dia mametraka vidiny ambany ho an'ny $ 1.500 AppleCare + ary raha irintsika ny napetraka miaraka amin'ny iPhone dia mitentina 1.600 $ isika.
Mazava ho azy fa raha mijery ny vidin'ny AppleCare + ho an'ny Watch and Watch Sport isika dia tsy afaka milaza fa mivelatra i Apple rehefa manao fifanarahana momba ny fitaovana roa isika, fa matetika i Apple dia tsy manao fihenam-bidy amin'ny karazany rehetra ary tsy manao izany amin'ny fifanarahana AppleCare roa miaraka. Ny maodely Watch Edition dia vita amin'ny volamena sy amin'ny kristaly safira, ka azontsika tsara fa manasitrana amin'ny fahasalamana i Apple mahatratra 1.500 $ amin'ny fiantohana azy io Ary ampio io $ 100 ho an'ny iPhone amin'ny totalin'ny $ 1.600.
Izao ny fanontaniana tsy azo adino, Hividy AppleCare + amin'ny famantaranandronao ve ianao raha mividy azy?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple products » Apple Watch » AppleCare + ho an'ny Watch Edition sy iPhone $ 1.600
Ny saga Star Wars dia tonga amin'ny iTunes amin'ny alàlan'ny varavarana fidirana